Zvinyorwa zvaSuzi Tripp pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Suzi Tripp
Suzi Tripp akabatana neBrooks Bell muna 2011, achitarisira uye achikura zvirongwa zvekuyedza yavo yekuwedzera rosta yemabhizinesi emakambani. Mune rake razvino basa seVP yeInsights, Suzi anokwanisa kuenderera mberi nechido chake chekugadzira zvine hungwaru nzira dzekuyedza uye kufumura zvine musoro vatengi ruzivo rwekugadzirisa matambudziko akaomarara ebhizinesi.
NeChishanu, Gumiguru 1, 2021 NeChishanu, Gumiguru 1, 2021 Suzi Tripp
Ongorora: Chinyorwa ichi chakanyorwa na Douglas Karr kubva kubvunzurudzo yeQ & A naSuzi kuburikidza neemail. Kuvimbika zvirongwa zvinopa mhando nemhando yekuchengetedza vatengi vadzo vovachinja kuva vateveri vane hasha. Nekutsanangurwa, nhengo dzekuvimbika dzinoziva nezve yako mhando, vari kushandisa mari newe, uye vari kukupa iwe yakakosha data mune izvi maitiro. Kune masangano, mapurogiramu ekuvimbika inzira dzakakodzera dzekufumura nzwisiso ine musoro nezvevatengi, dzidza nezve chii